Midowga Africa oo ka hadlay dagaalkii shalay ay Al-shabaab ku qaadeen ciidamadii ku sugan Buula-Mareer – Madal Furan
Hoy > Warka > Midowga Africa oo ka hadlay dagaalkii shalay ay Al-shabaab ku qaadeen ciidamadii ku sugan Buula-Mareer
Midowga Africa oo ka hadlay dagaalkii shalay ay Al-shabaab ku qaadeen ciidamadii ku sugan Buula-Mareer
Muqdisho (Madal Furan) – Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Ciidamada AMISOM Francisco Caetano Madeira, ayaa war kasoo saaray weerarkii cuslaa ee ka dhacay degaanka Buulo-Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada ay si adag ula dagaalameen Al-Shabaab , islamarkaana ay ka guuleysteen kuwaa soo weeraro is xig-xigay ku qaaday degaanada Buula-mareer,Golweyn iyo Qoryooley oo dhammaantood ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose.
War ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in marka hore Al-Shabaab weerarkooda ay ku bilaabeen Qaraxyo,waxaana la bur buriyay labo ka mid ah gawaari ay ka soo buuxiyeen Walxa Qarxa,sidoo kale Ciidamada ayaa la wareegay nuucyo kala duwan oo hub ah oo Shabaab ay wateen sidda warka lagu sheegay.
AMISOM,ayaa sheegtay in weerarka kaga dhinteen Afar askari, halka lix kale dhaawacyo fudud ay soo gaareen,waxaana Madaxda AMISOM ay ku amaaneen ciidamada sidda Al-Shabaab uga hortageen una hureen naftooda.
“ Waan ku faraxsannahay ciidamadeena geesiyada ah,kuwaasi oo aan ka daalleyn sii wadida iney ka taqalusaan Al-Shabaab si ay nabad iyo Xasilooni ugu soo celiyaan Soomaaliya,” ayuuyiri Mr. Madeira.
Warka kasoo baxay AMISOM ayaa kusoo beegmaya xilli Al-Shabaab ay sheegteen in ay dileen u dhawaad 59 Askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM ka dib Weerar ay ku qaadeen degaanka Buulo Mareer Shalay.
Guddoomiyaha golaha Shacabka oo la kulmay Madaxweynaha Puntland+ Sawirro
DAAWO:-Qaramada Midoobay oo wakiil cusub u soo magacowday Soomaaliya
Bam gacmeed caawa lagu tuuray bar kontorool magaaladda Boosaaso oo dhimasho sababay